dharma ratna shrestha- यी हुन् कमल प्रसाद त्रवाली । जो किस्ट बैंंक हुँदा कार्यकारी िथए र यिनैले धितोबापत कम्पनीको पुस्तक र भक्तपुरमा रहेको जग्गाको मूल्य रु १७ करोड पाँच लाख हुने गरी कमसल धितोको अधिक मूल्यांकन गराई २०६७ असार १ गते किष्ट बैंकबाट १२ करोड जोखिमयुक्त कर्जा लिएको र सो कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकलाई ठगी गरेका थिए । यिनका परिवारजनले समेत वेंकको दोहन गरेको आरोप छ ।
ठगी गरेकै कारण यिनी मुद्दामा फसे र फरार भए । तर यिनका मतियार जम्को प्रकाशन प्रालि अनामनगर, काठमाडौंका सञ्चालक देवकी बस्ताकोटीलाई प्रहरीले हालै पक्राउ गरेको छ । बस्ताकोटीमाथि बैंकिङ कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७३ जेठ १३ गतेको फैसलाले भक्तपुर, दुवाकोट घर भएकी बस्ताकोटीलाई चार वर्ष कैद र ४ करोड २६ लाख ८३ हजार ५०० जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । बस्ताकोटीले जानाजान आफूलाई पक्राउ गराएकाले पक्राउ पर्नुमा कानुनी खेल रहेको केही वकालतमा लागेकाहरुले आशंका गरेका छन् ।
यद्यपि बस्ताकोटीलाई सीआइवीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको हो । अव उनी ेजेल परेकी छिन् र उनलाई बचाउने प्रपञ्च पनि सुरु भएको छ ।
तर मुख्य आरोप किस्ट बैंकका कार्यकारी कमल प्रसाद ज्ञवाली कहिले पक्राउ पर्लान् ? यस प्रश्नमा सीआइवीले मुख खोलेको छैन । भनिन्छ, उनी शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्षका नातेदार पनि हुन् र उनकै आदेशमा उनी बैंकर बनेका थिए । ठूलै रजगज पनि गरेका थिए । तर उनी फसे, आफ्नै कारणले फसे ।
किस्ट बैंक प्रभू बैंक बनिसकेको छ । प्रभु बैंकले निकै प्रगति पनि गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा छलाङ नै मारेको छ यो प्रभु बैंकले । किस्ट बैंक पनि त्यतिबेला निकै हल्लीखल्लीका साथ अघि बढेको बैंक थियो । तर कमलप्रसाद ज्ञवाली र राजनीतिक प्रभावमा परेर ऋण लगानी गर्दा उनी नामोनिसान नरहने गरी फस्न पुगे ।
यतिखेर राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा राष्ट्र बैंकका निरीक्षण विभागदेखि गभर्नरसम्मलाई प्रभावमा पारेर अनेकन बैंक, वित्तीय संस्था, विकास बैंकहरुले समेत ठूलै हिनामिना गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुको पालना नगर्ने बैंकहरु पनि धरै नै छन् । तर तिनीहरु अहिलेसम्म त जोगिएका छन्, कहिलेसम्म तिनले कच्चा चिठ्ठा छोप्न सक्लान् ?
त्यसै पनि देशको आर्थिक स्थिति नाजुक छ । रेमिटान्समा चलेको अर्थतन्त्रको रिडको हड्डी कुनबेला भाँचिन्छ भन्न सकिन्न । जुन देशको अर्थतन्त्र १२ खर्बको बजेटमा ९ खर्बको व्यापार घाटामा चलिरहेको छ, त्यस्तो देशको अर्थतन्त्रबारे यकिन रुपमा विश्वस्त हुने आधार रहदैन । त्यसमाथि उत्पादन, रोजगार, निकासी र सवल अर्थतन्त्रका मानक मार्गमा चलेको भए अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनसक्ने थियो । यत्ति भनौं, पशुपतिनाथले राजनीतिमात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि धानिदिएका छन् ।